Archive du 20170905
Didier Ratsiraka Tsy milavo lefona
Nisavoritaka ny mpiserasera amin’ny “facebook” ny alahady 3 septambra teo noho ny fielezan’ny resaka fa nodimandry ny amiraly Didier Ratsiraka, izay efa hananika ny faha-81 taonany.
Fomba nananganana ny CFM Vara-datsaka ny fanakianan’ny CRAM
Amin’ny fomba ahoana no hilazana fa mahaleotena ireo olona afaka tamin’ny fanadinana am-bava momba ny “taranja fampihavanana Malagasy” ireo ?
Antsojay sy sakantsakana Mampitandrina Ravalomanana
“Ho avy ny fifidianana, ka izay iray tian’ny olona eo”, hoy i Marc Ravalomanana manoloana ny sotasota ataon’ny fanjakana HVM aminy.
Reraka eo fotsiny
Manao ahoana ry Jean a ! Inona indray izany izao no tsaho sy resaka mamoafady hataonareo anio? Efa tena mirarakompana mihitsy izy ity ry Jean saingy tsy mbola tratra aloha ianareo,
Airtel sy Camusat Miara-mitsinjo ny mpanjifa
Nanavao sy nanatsara ireo karazana tolotra omena ny mpanjifa rehetra misy ao aminy ny orinasam-pifandraisanaAirtel Madagascar mba hifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena.
Ady totohondry Malagasy Mikendry ny Lalao olympika 2020
Taranjan’olon-tokana ny ady totohondry ka na atleta iray aza dia efa afaka mandray anjara amina fifaninanana iraisam-pirenena.
Rugby à XV Miala any indray ny CT Tanà-Ville
Basikety sokajy U 16 Tompondaka ny ASCB Boeny sy ny FANDRASA Matsiatra Ambony
Ny ekipa zatovolahin’ny Ascb Boeny nandavo ny Ascut Atsinanana tamin’ny isa 76-53 tamin’ny famaranana sy ny ekipa zatovovavin’ny
Mbola anjaran’ny fitondram-panjakana hatrany ve amin’izao fotoana nY milaza fa maika ny fampandrosoana ? Moa ve tsy efa ela izy io no tokony ho natomboka ?
Kaominina Ivato sy ny fanjakana Mivaingana ny fiaraha-miasa
Fotodrafitrasa telo samihafa no notokanana omaly alatsinainy 4 septambra teny amin’ny kaominina Ivato, vavahadin’i Madagasikara dia ny CSB II Ambodirano, EPP Ilaivola ary lalana ahafahana mivezivezy mankany amin’ny INPF.
Fitantanana ny hetra Hisy fenitra vaovao
Nosokafana teny amin’ny Paon d’Or Ivato omaly alatsinainy 4 septambra ny andiany faha-3 amin’ilay kongresy fanao
Fizahantany Tsy ara-dalàna ny 50%-n'ireo mpandraharaha ao Tolagnaro
Atrikasa tsotra kanefa nahafantarana zavatra maro no natao ny zoma 1 septambra teo tao Tolagnaro, nanasana ireo mpandraharaha ara-pizahantany sy izay misehatra amin’io asa io.
Sahondra Rabenarivo Lesoka fototra ny kolontsaina politika
Manomboka mibahan-toerana eto amin’ny firenena amin’izao herintaona mialoha ny fifidianana izao ny fanehoan-kevitra politika isan-karazany.
Poezia Efa misy matihanina
Anisan’ireo poeta mbola tanora Razakason Fidy, fantatra amin’ny anarana maha mpanakanto Fify Razakason.
Trafikana « héroïne » Voasambotra tao Vohémar i Sahad Mohamad
Efa-bolana no nikarohana an’i Sahad Mohamad no izao tratra izao. Mpanao trafikana zavamahadomelina mahery vaika toy ny « héroïne »
Jiolahy saika handositra Maty voatifitry ny zandary izy efa-dahy
Notafihin’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ny mpivarotra iray tao Tsaramiadana, kaominina Marokarima, distrikan’i Mananjary ny zoma 25 aogositra.
Mpamadika sendra dahalo 6 namoy ny ainy, 2 hafa maratra mafy
Nitrangana asan-dahalo tany amin’ny kaominina Bemaha, Distrikan’i Betafo ny zoma 1 septambra lasa teo.
Fanafihan-dahalo Lasibatra indray tany Ambatofinandrahana
Notafihin’ny dahalo 40 lahy mirongo basy mahery vaika tao Betabika, kaominina Fitampito distrikan’Ambatofinandrahana, omaly alahady 3 septrambra tamin’ny 5 ora maraina.